Creative Writing » ဘယ်ကိုသွားလဲ မောင်တိမ်မည်း… မြို့ ပတ်ရထားစီးမလို့ ဆို…	35
ဒီမျက်ရည်ဟာ စိုက်ပျိုးရေးတွေ ဖြစ်ထွန်းစေသလို.......
ရေကြီးပီး လူတွေကိုလည်း အတိဒုက္ခရောက်စေပါတယ်........
ကောင်းသော တိမ်မည်းဖြစ်အောင် ကြိုးစားလျှက်ပါလို့ ..........
View all posts by တိမ်မည်း →	Blog
စည်းနဲ့ ကမ်းနဲ့ လစ်​ဘရယ်​ ​ယောကျာ်း says: ရန်ကုန် မြို့ပတ်ရထားကို ငယ်တုန်းက တော့ စီးဖူးသဗျ…
တိမ်မည်း says: .အရင် ခေတ်ထက်စာရင် အများကြီး သာသွားပါပီ…
Ma Ma says: လွန်ခဲ့တဲ့အနှစ် ၄၀ကျော်လောက်က နယ်မှာနေတော့ ရန်ကုန်ရောက်တုန်းဆိုပြီး အဖေက မြို့ပတ်ရထားလိုက်စီးပေးတယ်။
နိုင်ငံခြားမှာ MRT တွေ ဥဒဟိုသွားပြီး သွားလာရေးမှာအဓိက အသုံးပြုနေရတာကိုတော့ ဘတ်စကားစီးရတာထက်စာရင် အများကြီးအဆင်ပြေအကျိုးများလို့ သဘောကျသား။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 579
တိမ်မည်း says: ကျွန်တော်ကတော့ ရထား အတော်စီးဖူးတယ်လို့ ပြောလို့ ရပါတယ်…
သူတို့ ဆီကဟာကို ကြည့်ပီး ရန်ကုန်သာ အဲ့လို ဖြစ်ရင် ကောင်းမယ်လို့မျှော်လင့် မိတာ အမှန်ပါ…. Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 9261
ဦးကြောင်ကြီး says: စစ်တိမ်မဲ
ခင်ဇော် says: မှတ်သားးဖွယ်ရာပဲ…
တိမ်မည်း says: .လွဲတာတော့ မပြောနဲ့အမရေ….
Alinsett @ Maung Thura says: ဂျပိုးတွေ ကိုက်တုန်းပဲလား
တိမ်မည်း says: ၂၀၀ တန်း ၃၀၀ တန်း ကတော့ ဂျပိုး မကိုက်ဖူး ခင်ဗျ…
kai says: ၈၈ကျောင်းသားသပိတ်တုံးက… အာအိုင်တီ(ကြို့ကုန်း)ကနေ.. မြို့ထဲ..လမ်းမတော်ဘူတာအထိ.. သူငယ်ချင်းတွေနဲ့.. ရထားလမ်းကြောအတိုင်းလမ်းလျှောက်ပြန်ခဲ့ရတာသတိရမိတယ်..
တိမ်မည်း says: သဂျီးရေ ဒါကို သူတို့မသိဖူးများထင်လေစ… အခုတောင် အိမ်ခြံမြေဈေးတွေ အေးနေလို့ဒေါ်လာဈေးဝင် မွေနေတာ ကမောက်ကမ ဖြစ်နေတယ်….
အောင် မိုးသူ says: အဲကွန်းရထားတော့ တကယ်မစီးဖူးသေးဘူး။
တိမ်မည်း says: လတ်မှတ်ရောင်းတွေကို သာ အသေအချာမေးပါ ကိုအောင်မိုးသူရေ….
ဦးကြောင်ကြီး says: သပ်ချောင်တိမ်မဲ လက်ရှောင်ဇိမ်ဆွဲ ဖက်ပေါင်အိမ်ထဲ ဗွက်ရှောင်လိမ်ဖဲ
surmi says: အခုပြထားတဲ့ ခရီးအပွာအဝေနဲ့ရောက်ရှိချိန်အရဆို
ကြည့်မြင်တိုင်ကနေ လှည်းတန်းကို ကားစီးရင် မိနစ် ၄၀ လက်ရှိအချိန်မှာတစ်မြို့လုံးနီးပါးလမ်းတွေပြင်နေတော့ အလွန်ကျပ်ဗျာ
တိမ်မည်း says: မင်္ဂလာဒုံကနေ မြို့ ထဲလာမယ့်လူ တို့ … အင်းစိန်ကနေ မြို့ ထဲ လာမယ့်သူတွေအတွက်ကတော့ ဈေးကော အချိန်ပါ သင့်လျော်ပါတယ်… ခရီးတိုသမားတွေ အတွက်ကတော့ ဘူတာ ကို သွားရတာ… ရထားလာအောင် စောင့်ရတာနဲ့ ကတော့ ကားနဲ့ ယှဉ်ရင် သိပ်မကာမိသေးဖူး ခင်ဗျ…
Mike says: .RIT တက်တုန်းက မြို့ပါတ်ရထားကို လေးနှစ်လောက်အမုန်းစီးတက်ခဲ့တာ
တိမ်မည်း says: ဦးကြီးမိုက်လည်း ရထားအတော်စီးခဲ့သကိုး…..
၀င့်ပြုံးမြင့် says: .မဆိုင်ပေမယ့် ပြောတော့ပြောပြချင်တယ်။ ရန်ကုန်မှာနေရတာ မွန်းကြပ်လိုက်တာ။ နယ်မှာပဲ နေချင်တယ်။ နယ်မှာက ဘယ်သွားသွား စက်ဘီးလေးနဲ့၊ ကျန်းမာရေးလည်းကောင်း၊ ကိုယ်လက်လှုပ်ရှားမှုလေးနဲ့ပေါ့။ လျှပ်စစ်မီးသာ မှန်ပစေ၊ နယ်မှာ နေလို့ပိုကောင်းတာ သေချာတယ်။
တိမ်မည်း says: .ဟုတ်… ကျွန်တော်ကတော့ နယ်ကတက်လာတာ မကြာသေးဖူးခင်ဗျ…
padonmar says: ကျောင်းတက်တုံးက ကလေးဆေးရုံကနေ လမ်းမတော် ဆေးကျောင်းကို ရထားစီးပြန်ကြရတာ သိပ်ပျော်ခဲ့တာပဲ။
တိမ်မည်း says: . ဟုတ်တယ် အန်တီရေ…
တောင်ပေါ်သား says: ရထားက ၇ တန်းကျောင်းသားဘဝ ကျောင်းပြေးတုန်းက အတော်စီးခဲ့တာ ၊
တိမ်မည်း says: .စီးကြည့်ပါခင်ဗျ… အဲ့ကွန်းတကယ်ကောင်းတဲ့ရထားက အမှတ်စဉ်နဲ့ ရထားမဟုတ်ပဲ.. နာမည်လေးနဲ့ ဖြစ်နေတက်ပါတယ်… ရထားအချိန်စာရင်းတွေ တခုနဲ့ တခု တိုက်ကြည့်တော့ မတူညီတာလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်ခင်ဗျ…
ကြောင်ဝတုတ် says: မြို့ပတ်ရထားအကြောင်းပြောရရင်ဖြင့် မြေအောက်ရထား (Subway) ကို ခဏလောက်ထားပါဦးဗျာ…
တိမ်မည်း says: .ကိုကြောင်ဝတုတ်ရေ…
မြစပဲရိုး says: ဒီရက်ပိုင်း သတင်းတစ်ပုဒ် ထဲမှာ မြို့ပါတ်ရထား ဘူတာရုံ တွေ ကို အဆင့်မြင့်မြင့် ဖြစ်စေဖို့ အတွက် ပြုပြင်ဖို့ တင်ဒါ ခေါ်တယ် တဲ့။
တိမ်မည်း says: .အရီးရေ… အဲ့ကိတ်စကို ကျွန်တော်လည်း ဖဘမှာ အစိုးရကို သွယ်ဝှက်ပီး ဆဲပီးပါပီ… တော်တေ်ာ ဆဲချင်စိတ် ပေါက်သွားလို့ ပါ….
uncle gyi says: မျှောကြတယ်လား
တိမ်မည်း says: .မျှော်လင့်ချက်ရှိမှ အသက်ရှင်ကြရတာကို ခင်ဗျ… မျှော်လင့်နေဦးမှာပါ… ကျွန်တော် ပြည်သူ တယောက်ပါ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 5021
Mr. MarGa says: ရထားစနစ်​ကို သေချာကောင်းအောင်​လုပ်​နိုင်​ရင်
တိမ်မည်း says: .အဲ့လိုရင်းကတော့ တော်တော်များများ သိလေရဲ့… သို့ ပေသိ ငါတို့ ရဲ့ ချစ်လှစွာသော အစိုးရကတော့ ဒါမျိုးထက်စာရင် ကုန်းကျော်တံတား ဆောက်ဖို့ ပဲ စိတ်ဝင်စားလေရဲ့…..
Ma Ma says: သတင်းစာမှာ ကားလမ်းပိတ်တာကို တံတားထပ်ဆောက်ဖို့မလိုပဲ ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ ကူညီပေးချင်လို့ဆိုပြီး သတင်းစာမှာ နာမည်နဲ့ဖုံးနံပါတ်ထည့်တဲ့ ကြော်ငြာကို ဖဘမှာ ၀ိုင်းရှယ်ကြတာတွေ့လိုက်ရသေးတယ်။
နောက်တော့လည်း ဘာမှဖြစ်မလာပါဘူး။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 579
တိမ်မည်း says: .ဟုတ်တယ် အန်တီ Ma Ma ရေ… တကယ်တမ်းတော့ ကုန်းကျော် မဆောက်ပဲ ဖြေရှင်းလို့ ရတဲ့ နည်းတွေရှိပါတယ်… ဥပမာ မြို့ ပတ်ရထားပေါ့… နောက်ပီး ဘက်စ်ကားတွေ စီးကမ်းရှိအောင်လုပ်တာ… ကားတင်သွင်းမှူကို တင်းကျပ်တာ… မလွယ်တဲ့ အလုပ်တခုဖြစ်ပေမယ့် လုပ်ရင်တော့ ဖြစ်မှာပါ… ခက်တာက မလုပ်တာ… လေပါတယ်….
Was this answer helpful?LikeDislike 1608
ကြောင်ဝတုတ် says: Civil Management ကိုမသိတဲ့သူတွေက မီးစင်ကြည့်ကနေတဲ့အချိန်ကြီးမှာဗျာ….